प्रहरीले होटलमा छापा मार्दा चर्चित नायिका समेत पक्राउ, हेर्नुहोस् प्रहरीले क-कसलाई समात्यो? – Sanjal Nepal
Homeसमाचारप्रहरीले होटलमा छापा मार्दा चर्चित नायिका समेत पक्राउ, हेर्नुहोस् प्रहरीले क-कसलाई समात्यो?
January 19, 2021 admin समाचार 1243
यस घटनामा प्रहरीले एक बलिउड अभिनेत्री सहित तीन युवतीहरुलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले आरोपितको बिरूद्ध भारतीय संहिता (आईपीसी) को व्यापार (रोकथाम) कानून अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
जानकारीका अनुसार क्राइम ब्रान्चको टोलीले शुक्रवार दिउँसो एउटा पाँच तारे होटेलमा छापा लिएको थियो । प्रहरी टोलीका सदस्यहरूलाई ग्राहकका रूपमा होटल पठाइएको थियो, जहाँ उनीहरूले यस्तो कार्यको डीलरहरूलाई भेटेका
बलिउड चर्चित अभिनेत्री र डान्सरहरु पक्राउ परेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ तर को हुन् भन्ने नाम खुलाएको छैन । मानवअधिकारको रक्षाका लागि उनीहरुको नाम गोप्य नै राखिने प्रहरीको दावी छ ।
१३ करोड ३१ लाख उठ्यो बाबा मिडि,यामा सक्दो छिट्टो शे’ यर गर्नुहोस ! ( मा,र्मिक भिडियो सहित )
November 26, 2020 admin समाचार 1902
स्कटनेपाल, १३ महिने सियोना श्रेष्ठको लागि आर्थिक सहयोग अभियान यतिबेला चलिरहेको छ । देश बिदेशका नेपालिहरुले यो अभियानमा सहयोग गरिरहेका छन् । यता नेपाली सेलिब्रेटिहरुले पनि सियोनाको उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन । आजको
यि २ दुधे वच्चालाई रुवाउँदै आमाले घर छाडीन्, आमा परपुरुषसँग हिँडेपछि साना छोराछोरी निरन्तर भक्कानिइरहेका छन्, मम्मी घर आउनुहोस् भन्दा देख्नेहरु सबै भक्कानिए,
December 25, 2020 admin समाचार 1382
काठमाडौँ । भोजपुरका राजु तामाग नाम परिवर्तनलाई लागेकै थिएन यसरी आफ्ना २ सन्तानकी पत्निले रातारात घर छाडेर हिँड्छिन् भन्ने । तर २ साना नानीकी आमा संगीता एकाएक सम्पर्क विहिन भएपछि राजु अहिले आँशुको आहालमा डुबेका
November 24, 2020 admin समाचार 3961
धनि अझै धनि बन्दै जाने र गरिब झन् दरिद्र हुदै जाने यो संसार को अचम्मको रित रहेको छ। आजको दुनियाँमा गरिबी भन्दा अर्को कुनै ठुलो संकट मान्छेहरु देख्दैनन् । नेताहरुले पनि हरेक पटक गरिबी निवारण
LEX 18 agenda conversation: Job club (445152)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418716)
Hello world! (346030)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318823)